क्युन्का, स्पेन: ठाँउहरु र फोटो
यसको पाहुनाहरूलाई आविष्कारहरू धेरै प्रस्तुत जो सुरम्य शहर, एउटा यात्रा, नयाँ र असामान्य कुरा चाहनेहरूलाई लागि एक महान विकल्प छ। नक्साको क्युन्का (स्पेन) को शहर मा लगभग imperceptible, जो अनिश्चितकालीन वर्णन गर्न सकिन्छ ठाँउहरु, मध्य युग को आत्मा महसुस हुनेछ।
दुई नदी Júcar र Uekar र पुरानो भाग बीच एक पहाडी मा स्थित हिमाल मा स्थित क्युन्का को eponymous प्रान्तको राजधानी, सचमुच precipice मँडरा, enthralls घरहरू। हाम्रो युग को प्रारम्भिक दिनमा स्थापित शहर, यसको अनुकूल भौगोलिक स्थिति को सानो बन्दोबस्त छनौट गर्ने सेल्टिक योद्धाहरू घर छ: हिमालहरू चाँडै याद बेसी र शत्रु को उत्कृष्ट दृश्य प्रस्ताव। पछि क्युन्का रोमी सिपाहीहरूले र शहर यसको वर्तमान नाम दिए जुन अरब, कब्जा।
मध्य युग मा तिनीहरू यहाँ बस्ने विभिन्न nationalities छ, तर सबै एक लघु शहर बासिन्दाहरू, धार्मिक आधार मा एक खण्ड, अलग चौथाई स्थापित गर्दा मसीहीहरूको उपस्थिति पछि परिवर्तन भयो। क्युन्का (स्पेन), को जातीय क्षेत्रमा विभाजित, एकदम लामो समय गिरावट मा प्राकृतिक प्रकोप प्रहार र विपत्ति थियो। केवल XIX सताब्दी मा प्रान्तको प्रशासनिक केन्द्र भएको छ जो शहर, को आर्थिक वृद्धि गर्न थाले।
सत्कार देश को यूनेस्को-सूचीबद्ध मणि अद्वितीय वास्तु स्मारक र आश्चर्यजनक प्राकृतिक परिदृश्य जोडती। फोटो जो आनन्द इतिहास प्रेमीहरूलाई, मध्य युग को आत्मा मा विभाजित छ हो क्युन्का (स्पेन), को प्राचीन शहर ऐतिहासिक केन्द्र र आधुनिक जिल्लामा भिगो, हालै देखा पर्नुभयो। शहर रूपमा यहाँ विगतका eras को एकाग्रचित्त मुख्य ऐतिहासिक साइटहरु छन् पर्यटकहरु ठूलो चासो पुरातन उपस्थिति, संरक्षित छ।
Basilica डे Nuestra Señora डी Gracia
शहरमा प्लाजा मेयर वर्ग (प्लाजा मेयर) मा यसको उपस्थिति धेरै वास्तु शैलीहरू मा जोडती जो गिरजाघर छ। एक अरब मस्जिद को साइटमा Erected, त्यो सरल भव्यता र प्रभावशाली उपस्थिति पर्यटक आँखा परिहाल्छ। प्रशंसा मात्र मोहरा सजाया छैन, तर भित्री र शानदार।
अब गिर्जाघर धारण गर्ने एक संग्रहालय छ एल ग्रिको द्वारा चित्रहरु र धार्मिक कलाकृतिहरू।
Convento डे ला Merced
को गिर्जाघर गर्न अर्को xvi शताब्दीमा निर्मित Merced को विहारको, छ र दुई भागमा विभाजन गरिएको छ। पुनर्निर्माण धेरै पटक भवन, शत्रुता समयमा क्षतिग्रस्त, देश को इतिहास र संस्कृति को एक स्मारक घोषणा गरे। प्रसिद्ध ल्यान्डमार्क मूल मात्र 15 कक्षहरू थियो, तर भिक्षुहरूको संख्या संग र यसको क्षेत्र विस्तार। यो उद्देश्य लागि पनि एक स्थानीय aristocrat को आश्रममा घर आसन्न खरिद गरिएको।
भ्रमण क्युन्का (स्पेन) आवश्यक प्रहरीधरहरा mañana थाह - ऐतिहासिक स्मारक, शताब्दीयौंदेखि समयअघि अरब बनाइएको थियो जो ramparts, को reminiscent। प्राचीन घडी, यसलाई स्थित, स्थानीय बासिन्दा अनुसार, बस समय र पुरातन शहर को इतिहास गणना छैन। अब पत्थर संरचना, एक हेर्ने मंच जो छिमेकी गाउँ को मनोरम दृश्य प्रदान गर्दछ नगरपालिका गर्न भन्दा हस्तान्तरण संग।
CASTILLO डे क्युन्का
एक रक्षात्मक संरचना, को xvi शताब्दीमा निर्मित देखि, त्यहाँ पर्यटकहरु बीच चासो पैदा केही सुरम्य भग्नावशेष थिए। उच्चतम तपाईं पूर्ण सम्पूर्ण शहर हेर्न र एक आश्चर्यजनक फोटो बनाउन सक्छ जो देखि, ऐतिहासिक केन्द्र को बिन्दु को भग्नावशेष मा। दुर्भाग्यवश, यो सार्वजनिक गर्न बन्द गरिएको छ किनभने, भित्र निरीक्षण गर्न पुरानो महल काम गर्ने छैन।
पर्यटक छक्क मानिसहरू धनी भ्रमण कार्यक्रम एक अद्भुत छुट्टी संयोजन आउन जहाँ क्युन्का, स्पेन, एक लघु को पहिचान भएका छन् कि घरहरू कारण चट्टानी किनारा नजिक। पुनःस्थापित र मूल वास्तुकला डिजाइन संरक्षित, Casas Colgadas को घाटी माथि स्थित र Swallow गरेको गुँड जस्तै precipice भन्दा झुन्डिएको छन्। पहिले तिनीहरूले नागरिकहरु बस्ने, र अब यो एक आरामदायक रेस्टुरेन्ट र एक स्मारिका पसल घरहरुमा जो एक लोकप्रिय पर्यटक आकर्षण छ।
कुनै एक जो, ढुङ्गा मा burrowing को ठाडो भीर मा घरहरू निर्माण गर्न साथ आए थाह, तर तिनीहरूलाई को पहिलो उल्लेख भएको XV शताब्दीमा पहिले नै थिए। केही वृद्धि गर्न डराउँछन् अरूलाई असामान्य आकर्षण भ्रमण पछि नम्र चक्कर आना अनुभव, तर वास्तवमा यो पर्यटकहरु वस्तुहरु लागि सुरक्षित छ। प्राचीन आत्मा संरक्षित छन् भन्ने अद्वितीय घरहरू बीचमा, यो (कैस डेल रे) को घरहरू एक पटक Royals बसे र अन्य, भनिन्छ "घर मत्स्यस्त्री" अमूर्त कला को एक संग्रहालय छ मा, सबै भन्दा प्रसिद्ध थियो।
सैन पाब्लो को पुल
को झुन्डिएका घरहरू सेन्ट पावलको विहार बाट क्षेत्र अलग छ कि गहिरो chasm भन्दा, swaying Puente डे सान पाब्लो धातु समर्थन संग फैलिएको। हाइट्स डराउँछन् गर्ने मान्छे, अद्वितीय ऐतिहासिक स्मारक, चट्टान निर्माण गर्न उदाउनु असम्भाव्य हो: सान पाब्लो बारेमा 60 मीटर को पुल गर्न जमीन देखि दूरी, र railings धेरै उच्च छैन। को पर्यटकहरुका लागि उत्साह, यो त्यहाँ weightlessness एक भावना हो भनेर यहाँ छ र यो घाटी भन्दा उडान भने गुरुत्वाकर्षण को सबै व्यवस्था को negation देखाउँदै को क्युन्का (स्पेन) शहर को 900 मिटर भन्दा बढि को एक उचाइ मा देखिन्छ।
र सूर्यास्त वा सूर्योदय, मा प्राप्त असाधारण, हेर्दै गर्दा के सुन्दर फोटोहरू जब सूर्य गरेको रेज स्वर्ण रक, ढुङ्गा घरहरू, आफ्नो लडी छन् जो अँगालेर। यी आश्चर्यजनक दृश्यहरु लागि यहाँ विश्वभरिबाट पर्यटक हजारौं आकर्षित गर्छ।
ला सिउडाडड Encantada र Ventana डेल डियाब्लो
अनियमित कमजोर हुँदै गइरहेको चट्टानहरु को एक वास्तविक Maze - क्युन्का (स्पेन), एक अद्वितीय उपस्थिति हासिल गरेको छ जो, आफ्नो प्राकृतिक पार्क "ENCHANTED शहर" को लागि प्रसिद्ध छ। एक रहस्यमय वातावरण संग अद्वितीय प्रकृति आरक्षित असामान्य फारामहरू र विचित्र प्रजातिका formations प्रशंसा, आगंतुकों मा एक indelible छाप पार्छ। पर्यटकहरुका लागि छापिएको पैदल बाटो साथ भटक, तपाईं फरक जनावरहरूको नाउँ बोकेका, सबै चूना formations देख्न सक्छौं। एक विशाल च्याउ, ध्यान आकर्षित गर्न - तर सबै भन्दा प्रसिद्ध ल्यान्डमार्क Tormo अल्टोपराग्वे मानिन्छ।
प्रकृति आरक्षित को बाहिर निकाल्दै, तपाईं अवलोकन, एक रहस्यमय नामको सुन्दर गहिरो घाटी मा स्थित मा कल गर्न सक्छन् "शैतानको विन्डो।" तपाईं एक अद्भुत ठाउँ, नदी Júcar को उपत्यकाको सुन्दर दृश्य मा हुन एक पत्थर कट्टर मार्फत जानैपर्छ।
क्युन्का (स्पेन): समीक्षा
त्यहाँ हल्ला पर्यटक कुनै विशाल भीड छन् र यसको प्रमुख स्मारक सबै राम्रो नजर हुन सक्छ: छ कि छैन विदेशी यात्री, केही पर्यटकहरु बीच धेरै लोकप्रिय र त्यहाँ एक विशेष आकर्षण छ शहर मा। मेहमान प्रशासनिक केन्द्र, जो कोहीले नरमाइलो लाग्यो हुन जहाँ छैन को पुरातन र अद्वितीय स्वाद को विशेष वातावरण नोटिस।
अधिकांश मानिसहरू एक अद्भुत अर्थमा आफ्नो गले कि स्वीकार: तिनीहरूले मध्य युग एक समय मिसिन मा ओसारपसार छन् भने यो देखिन्छ। तथापि, प्रशासनिक केन्द्र को परीक्षा केही हिमालहरू चढ्नु बल छ, किनभने घण्टा बस एक जोडी छ। पर्यटकहरु रक्स मा स्थित पहिलो दृष्टि अद्वितीय बस्तियों मा प्रेममा पहिचान हो, र यहाँ हतारमा गरिएको छ जो छैन ती क्युन्का (स्पेन) र आकर्षण को सानो शहर थाह गर्न।
कसरी त्यहाँ प्राप्त गर्न?
हवाई अड्डा यहाँ छैन, र घनिष्ठ जो मास्को पुग्न सकिन्छ, र त्यसपछि धेरै तरिका को एक चयन गर्न राष्ट्रको राजधानी, छ। त्यसपछि दुई र आधा घण्टा सही ठाउँमा संचालित छन् भन्ने बसें लागि मैड्रिड गरेको बस स्टेशन स्वतः रिस देखि सार्वजनिक परिवहन द्वारा शहर सजिलो तरिका पहुँच।
तपाईं पनि मैड्रिड मा Atocha स्टेशन पेश गर्न, रेल मा प्राप्त गर्न सक्छन्। यात्रा समय तीन घन्टा भन्दा बढी छैन।
Fantastically सुन्दर क्युन्का (स्पेन), आकर्षण र फोटो यसको विशिष्टताको देखाउँछ कि, यो कठिन सधैं ऊर्जा भरिएको छ, किनभने प्राचीन कल छ। जीवन हृदय मा, आफ्नो उन्नत उमेर बावजुद, पूर्ण झूले, दिन र रात छ जसमा युवा र यो लुक्ने छैन एक शहर।
महिमा, सामारा इतिहास र फोटो को स्मारक
भिषा-मुक्त रूस लागि देश - यात्रा को लागि महान!
का दुबई जहाँ निर्णय गरौं?
फ्लोरेन्स भ्रमण - सौन्दर्य र प्रेरणा को एक शुल्क
सेन्ट पीटर्सबर्ग को तालिका कहाँ छन्? फोटो र समीक्षा
Kefir एक स्वादिष्ट तला केक बनाउन
के खाद्य पदार्थ भिटामिन B17 समावेश? भिटामिन B17: समीक्षाएँ क्यान्सर चिकित्सा विज्ञानियों
प्रयोग गर्न कोका-कोला 13 अप्रत्याशित
चित्रकला मांसपेशियों को लागि उत्तम अभ्यास: समीक्षा, वर्णन र प्रभावशीलता
हड्डी को प्रकार: आकार, आकार, को यौगिकों को प्रकृति
ओवन मा मशरूम संग पाकेका आलु: नुस्खा
होटल Capo खाडी होटल4* (Protaras, साइप्रस) फोटो र समीक्षा
केज: परिभाषा, संरचना, वर्गीकरण
खैरो कफ: कारण, उपचार। एक धूम्रपान को sputum रंग